रेडियो नेपाललाई चिठी - समय-समाचार
रेडियो नेपाललाई चिठी
१५ बैशाख २०७७, सोमबार ११:५९
प्रिय रेडियो नेपाल,
तिम्रो ओलीभक्तिप्रति हामीलाई लाज लागेको छ । तिमी ओली–गुटको रेडियो मात्रै होइनौं । हरेक नेपालीको करका पैसाले तिम्रो अस्तित्व चलेको छ । ओलीराज त छिट्टै सकिन पनि सक्छ, तिमी त अझै सयौं वर्ष निरन्तर निरन्तर चलिरहनु पर्छ ।
२००७ साल मंसिरमा भोजपुरबाट राणाशासन विरुद्ध लोकतन्त्रको विगुल फुक्ने नेपाल प्रजातन्त्र रेडियोको त्यो गौरवशाली इतिहासका निर्माता हौ । विराटनगरको जुटमिलभित्रबाट मजदुरको पक्षमा बोल्नेहरुको आवाजको प्रतिनिधि हौ, जतिबेला ओलीहरु जन्मिएकै थिएनन् । तिमी मात्रै यस्तो सरकारी मिडिया हौ, जसको जन्म तत्कालीन सरकारको विरोध गर्ने माध्यमका रुपमा भएको थियो । लामो समय सरकारी छायाँ र सिंहदरबारको चौघेरोमा बसेता पनि आफ्नो गौरवशाली इतिहास नविर्स । आफूले आफूलाई चिन । आफूले नगरेको गल्तीमा स्वामीभक्ति गाइरहनु पर्दैन ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीले वर्तमान प्रधानमन्त्रीप्रति अलि कटाक्ष गरे, तितो पोखे, कटु शब्द बोले, त्यसमा तिम्रो के दोष ? बालुवाटारले कारबाही गर्नु पर्ने भए बोल्नेलाई नै गर्ला नि ? उनी ज्यूँदै छन्, काठमाडौंमै छन् । उदाहरणका लागि ट्विटरमा ओलीराजको विरोध गरेको भनेर पूर्वसचिव भीम उपाध्याय हिरासत र अदालती कारबाहीमा तानिएकै छन् । उनले गलत ट्विट गरे भनेर के बालुवाटारले ट्विटरलाई नै कारबाही गर्ला त ? प्रेस विज्ञप्ति मार्फत् तिमीले हतारहतार आत्मसमर्पणको झन्डा उचालिहाल्नु हुँदैनथ्यो । तिमीले कार्यक्रमको अडियो फाइल नै वेबसाइटबाट डिलिट गर्नु हुँदैनथ्यो ।
मलाई लाज लागेको छ । तिम्रो सम्पादकीय स्वतन्त्रतामाथि बालुवाटारले धावा बोल्दा दुनियाँले पत्याएका तिम्रा कर्मठ कर्मचारीहरु चूपचाप छन् । के तिनीहरु जागिर खान र जागिर जोगाउन मात्रै त्यहाँ पुगेका हुन् ? पक्कै होइनन् । मलाई अझै आशा छ कम्तिमा तिम्रा दुईचार कर्मचारीहरु जागिरको चौघेरोभन्दा माथि उठेर तिम्रो अस्मिता र सम्पादकीय स्वतन्त्रताको रक्षार्थ खडा हुनेछन्, बोल्नेछन् । यो जागिरको सवाल होइन, रेडियो नेपालको अस्मिता र सम्पादकीय स्वतन्त्रताको सवाल हो ।
केही महिना अघि प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि आफू १४ वर्ष जेल बसेको कुरा तिम्रै कार्यक्रम मार्फत् सुन्दै थिए । उनले त्यो चौध वर्षलाई कतितिर भजाउने हुन् ? थाहा छैन । तर, तिमी यति लाचार पनि नबन जति बालुवाटारले बनाउन खोजोस् । रेडियो नेपाल जनताको आवाजको विर्ता हो, ओलीहरुको पुख्र्यौली सम्पति होइन । तिम्रो सम्पादकीय स्वतन्त्रताको रक्षार्थ हजारौं नेपालीहरु बोल्न तयार छन् ।
यो सत्ताकारितामै सिमित हुने कि पत्रकारिता गर्ने भन्ने अहम् प्रश्नको सवाल हो ।
उही तिम्रो शुभेच्छुक (यो लेख भानुभक्त आचार्यको फेसबुकबाट साभार गरिएको हो।)